‘सुनचाँदी व्यवसायको स्तरवृद्धिमा मेरा ४ प्राथमिकता छन्’–अध्यक्ष शाक्य(अन्तर्वार्ता)
माणिक रत्न शाक्य : अध्यक्ष
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आउनु भएको छ । सूनचाँदी व्यवसायको क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ?
हाम्रो तेश्रो महाधिवेशनबाट नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ । लगत्तै, अहिले हामीले सुनचाँदी व्यवसायको सुधारका लागि ४ वटा मुख्य पिल्लरहरुमा आधारित रहेर काम गर्ने योजना बनाएका छौ । पहिलो उपभोक्ताहरुका लागि गुणस्तरयुक्त, सरल र सहज तरिकाको सेवा तथा प्रोडक्ट उपलब्ध गराउनेमा हामी जोड दिन्छौ । व्यापारको लागि सबैभन्दा मुख्य भनेको उपभोक्ता नै हुन् । उपभोक्ताको काम राम्रोसँग गर्न सकेनौ, गुणस्तर दिन सकेनौ, मुल्यको पारदर्शिता हुन सकेन, तौलमा एकरुपता हुन सकेन भने त्यो विश्वसनीय व्यवसाय हुदैन । विश्वासनीय हुन नसके त्यो व्यवसाय टिक्दैन ।
अहिलेको कोरोना माहामारीको समयमा सबै उद्योग व्यवसाय, अर्थतन्त्रमा सुस्ती आएको छ । त्यसकारण अहिले त यस व्यवसाय पनि त्यति चलायमान भइसकेको छैन । तर क्रमिक रुपमा सुधार हुनेमा छ ।
अब हामीले उपभोक्तालाई प्रभावकारी सेवा दिने पार्टमा नै प्राथमिकताका साथ काम गछौ । त्यसमा गुणस्तर, मुल्य, वजन लगायतका कुराहरु आउँछन् । नयाँ र आधुनिक सबै डिजाइनका गरगहनाहरु अत्यन्तै प्रर्बद्धन गर्ने खालको उपभोक्तामैत्री कामहरु अघि बढाउने हाम्रा कार्यक्रम छन् ।
दोश्रो पिल्लर कालीगढ हुन् । कालीगढहरुले हामीलाई व्यवसाय गर्नका निम्ती, गरगहनाहरु निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका पर्दा पछाडी रहेर निभाउँदै आएका छन् । उहाँहरुले जुन किसिमको काम गरेर आफनो कला, क्षमता, कौशलता, सीप देखाएर गहनाहरु बनाइरहनु भएको छ । त्यसको मुल्याङकन गर्दै उहाँहरुलाई रोजगारी सुरक्षा र नियमित आयका लागि हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हामीले महासंघको तर्फबाट विभिन्न नीति नियम मार्फत ग्यारेन्टी गर्ने खालको योजना अघि बढाउँदै छौ ।
त्यसैगरी तेश्रो पिल्लर व्यवसायी हुन् । हामीसँग अहिले देशभर गरेर २० हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरु आबद्ध छन् महासंघ अन्र्तगत । उहाँहरुको आफनो व्यवसायको लगानीको सुरक्षा, व्यवसायको प्रर्वद्धन र उहाँहरुलाई आफनो व्यवसाय सुरक्षित र कानुनी रुपमा मार्यादित बनाएर अघाडी बढाउने क्रममा जुन किसिमको कार्यक्रमहरु आवश्यक छन् । ती व्यवसायीलाई फोकस गरेर हामी ल्याउँछौ । अन्तिम चौथो पिल्लरको रुपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुनचाँदी व्यवसायको माध्यमबाट योगदान दिने छ । त्यो राजस्वको मार्फतबाट हुनसक्छ, रोजगारीको मार्फतबाट हुनसक्छ, अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउन जुन आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको माध्यमबाट पनि हुनसक्छ । विभिन्न हिसावले देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गरेर लिएर जानलाई सुनचाँदीको तर्फबाट पनि योगदान दिएर नेपालको विकासमा योगदान दिने खालको कार्यक्रमहरु लिएर हामी अघि बढ्दैछौ ।
सुनचाँदीको मुल्यमा विगत एक बर्षयता निकै ठुलो परिवर्तन आएको छ । उतारचढाब उस्तै छ । के कारण हो ?
मुल्य बढ्नुमा राष्ट्रिय र अन्र्तराष्टिय दुबै कारण छन् । एउटा सुनको भन्सादर बढेकोले मुल्य बढेको हो । पहिला ६ हजार ५ सय थियो अहिले ८ हजार ५ सय प्रति १० ग्राम बनाएको छ । त्यसले पनि दुइ हजार त त्यत्तिकै बढ्यो । अर्को अमेरिकी डलरको नेपाली सटही दर ११२, ११३ बाट बढ्दै गएर १२२ सम्म पुग्यो । यो एक्चेन्ज रेटले जुन भाउ बृद्धि हुनासाथ जसरी ११० बाट १२० हुँदा १० रुपैँया बढ्यो । त्यो १० रुपैँया बढेको कारणले नै सपोज एक औं सुनमा नै १८ सय डलर परिरहेको छ भने १८ हजार रुपैँया त त्यो १० रुपयाँ एक्चेन्ज दर बढ्दाबाटै बढेको हुन्छ । त्यो एक्चेन्ज रेटले नै हामीलाई अलिकति असर गरिरहेको छ । त्यसको आलवा विदेशी अन्र्तराष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जुन किसिमले कोरोनाले, वा युद्धका कारण आदिले हुनसक्छ अथवा अघोषित टे«ड वार लगायत विविध कुराहरु आएका छन् । जस्तो कुरानाकै कुरा गर्दा भ्याक्सिन नआउँदा एउटा कुरा थियो । अहिले भ्याक्सिन आएको छ । अहिले अर्को अवस्था छ । त्यसमाथी पनि सेकेन्ड वयब भन्दै कोरोना भन्दा अझै घातक अर्को भाइरस आयो भनेर हल्ला आएका छन् । यी विभिन्न कुरा छन् जसले सुनको मुल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
अरु धेरै कुराहरु पनि छन् । त्यो पछाडी भुराजनीति र आर्थिक कारणहरुले गर्दाखेरी सुनको मुल्यमा प्रेसर परेर सुनको मुल्य पनि बृद्धि भएको छ । अस्ति इतिहासमै सबैभन्दा बढी २०८४ डलरसम्म सुनको भाउ पुग्यो । अहिले अलिकति घटेको छ । त्यो किसिमको उतारचढाब भोलाटायल छ । त्यसले पनि सुनको भाउ एकैपटक ७० हजारबाट बढेर १ लाख ३ हजार ५ सयसम्म पुग्यो । अहिले त्यो घटेर ९२ हजार वरीपरि आइपुगेको छ । यसरी एकै तोला सुनमा समेत ३०–४० हजारसम्म भाउ तलमाथी भएको यो एकबर्ष यता नै हो ।
अझै बढ्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
अमेरिकामा अहिले जुन नयाँ राष्ट्रपती आएका छन् । उहाँले नयाँ स्टुमुलेशन प्याकेज १.९ ट्रिलियन डलरको ल्याउँदैछन् । त्यो पैसा त्यहाँको सिटिजन सबैलाई खातामा एक जनालाई १४सय डलर हाल्दैछ । ट्रम्पको पालामा पनि राहत प्याकेजको रुपमा हरेक नागरिकको खातामा १२ सय डलरको दरले हालेका थिए । त्यो भन्दा अघि कोरोनाका कारण बेरोजगार भएकाहरुलाई ६ सयका दरले खातामा हालिदिएका थिए । अहिले नयाँ राष्ट्रपती जो बाइडेन आइसकेपछी उहाँले १४ सय डलर हरेक नागरिकको खातामा हालेर अर्थतन्त्रलाई अलिकति बुष्ट गर्ने खालको प्याकेज दिएको छ । त्यो पैसा बाहिर आएपछी अमेरिकी डलर अलिकति कमजोर हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यो पैसा थोरै होइन । उनीहरुले धेरै पैसा ऋण लिएर चलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसरी चलाइसकेपछी त्यसबाट ब्याजदर घट्ने सम्भावना हुन्छ । व्याजदर घट्नासाथ त्यसको सिधा प्रभाव सुनमा हुन्छ । सुनको भाउ बढ्न सक्छ । यता व्याजदर घट्छ । अमेरिकी मुद्रा प्रति विश्वको जुन एउटा रिर्जभ करेन्सीको रुपमा विश्वास छ । त्यो विश्वासमा कमी आउँछ । त्यो कमी आइसकेपछी त्यसको प्रभावले सुनको भाउ बढ्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसकारण अहिले विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय वीज्ञहरुले सुनको भाउ २५ सय डलरसम्म पुग्नसक्छ भनेर अनुमान गरेका छन् । अहिले १८५०–६० कोरेन्जमा छ । त्यही अनुपातमा तिनीहरुले भनेझै बढ्यो भने निकट भविष्यमै फेरी पनि सुनको भाउ अकल्पनीय रुपमा बढ्नपनि सक्छ ।
अन्त्यमा, सुनचाँदी व्यवसाय कत्तिको फस्टाउँदो छ ? के छ अवस्था ?
मुल्यबृद्धि एउटा कुरा भयो । कोरोनाको कारणले गर्दाखेरी नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुको आयस्रोत घटेको छ । धेरैले रोजगारी समेत गुमाएका छन् । कतिपयले कोरोनाकै कारण आधा तलब थापेर आयस्रोत कमजोर भएको छ । धेरैको धेरैथरी व्यवसायीहरु राम्रोसँग चलिरहेको छैन । त्यसकारण सुनचाँदीमा अहिलेको सिजनको बेलामा पनि जुन किसिमको चहलपहल र माग आउनु पर्ने त्यो आएको छैन । व्यापार मन्दीमै छ । क्रमिक सुधार हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । किनकी फागुनमा लगन पनि छ । चहलपहल अव देखिएला जस्तो मलाई लाग्छ ।
प्रस्तुती : रिसव गौतम–टिका तिमल्सिना
‘हामीले नेपालमै नमुना तरिकाले सहकारी संञ्चालन गरिरहेका छौ’
‘जनताले महसुस गर्नेगरी विकासका कामहरु अघि बढाएका…
पर्वतमा चार जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा
पर्वत २१,फागुन २०७७। पर्वत जिल्लामा चार जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्...
जुम्लामा यस वर्ष स्याउ उत्पादनमा दोब्बर गिरावट
जुम्ला२१,फागुन २०७७। जुम्लामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्याउ उत्पादनमा...
काठमाडौँ २१,फागुन २०७७। कोरोना महामारीमा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई करिब...